Pakistana: Fanabeazana, Fanantenana Farany · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Fanabeazana, Fanantenana Farany
Voadika ny 29 Aogositra 2011 14:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, русский, polski, Español, Italiano, македонски, English
Satria eo am-pivoahana amin'ny krizy sosialy sy politika ny ao Pakistana, navoitran'ny fiaramonim-pirenena ny maha-zavadehibe ny fanabeazana. Izany hevitra izany dia noho ny zava-misy sy fanantenana angamba, angamba fotsiny satria ny fanabeazana no fanalahidy hitondra filaminana eo anivon'ny ady an-trano anatiny mampitebiteby izay iainan'ireo Pakistaney isan'andro .
Mpisionkatserasera PakistaneyAly Nasser nanoratra hoe:
@alynaseer: Tokony hodinihana dieny izao ny rafi-panabeazana ao #Pakistan amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny tetikasa fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny tanora saranga antonony.
Bilaogim-baovao momba ny fanabeazana (avy any Florida, USA) ni-tweet ity vaovao mampisafoaka tsy mahagaga intsony ity:
@educationblog: Mandalo krizy ny rafi-panabeazana ao Pakistan, izay ambanin'ny dimampolo isan-jato ny tahan'ny fampianarana. pcrschool.org/news/?p=30782
Mpianatra mitondra sora-baventy sy afisy nandritra ny fihetsiketseham-panentanana momba ny fanabeazana ny Vehivavy, nokarakarain'ny Talen'ny Fampianarana Tsy Miankina ao Hyderabad. Sary avy amin'ny PPI. Copyright Demotix, 4 May 2011.
Tamin'ny bilaogy nosoratan'i Asad Alia tao amin'ny Express Tribune, izay nitondra ny lohateny hoe “Riaz te-hianatra teny Anglisy”; miresaka momba ny gazetin-jatovolahy sy ny finiavany te-hamaky sy hanoratra amin'ny teny anglisy. Niezaka araka izay tratrany izy mba hanampy io zatovo lahy io ary nanome azy ny adiresy mailakany mba hanoratany aminy rehefa mahay sy manoratra amin'ny teny anglisy tsara izy. Toy izao no nosoratan'i Asad Alli 11 taona taty aoriana:
Telo andro izay no naharaisako mailaka voalohany avy tany amin'i Riaz 11 taona taty aoriana. Voaporofo tokoa ny finiavany hianatra sy hiteny ilay fiteny (anglisy) fa tena misongadina.
Vavolombelona ny tantaran'i Riaz fa mangetaheta fanabeazana ny tanorantsika. Indrisy anefa, fa tsy mba nanorina fotodrafitrasa ilaina amin'izany ny mpitarika politika – saingy efa tantara taloha be izany.
Tsy manana fialantsiny azo atao amin'izany toe-javatra izany intsony isika. Raha samy mandray andraikitra avokoa ny iray isan-jato amintsika ka haka taona iray ao anatin'ny folo taona, ao anatin'ny folo taona dia ho 1,8 tapitrisa ny isan'ireo olona tena nianatra mba tokony ho hafa kokoa no fisehony. Lasa ny folo taona. Eritrereto fotsiny raha roa isan-jato amintsika no voasarika.
Indrisy fa tsy ny hevitra rehetra no mandrisika sy mankahery. Bilaogy maromaro no mitantara momba ny fari-panabeazana ao Pakistana izay tsy vitan'ny sarotra tanteraka ihany fa sady tsy misy fandrosoana ihany koa.
Araka ny nambaran'ny Dr. M. Pasha tao amin'ny bilaoginy:
Tiako ho tsapan'ny mpanao politika sy ny mpiasam-biraom-panjakana fa sarotra kokoa noho ny zavatra hafa sady mila fahamalinana tanteraka ny fanabeazana ny tanora ankehitriny anatin'ny vanim-potoanan'ny fanantotoloana ankehitriny. Tafiditra ao avokoa ny fanabeazana ara-pahaizana, ara-pihetseham-po, ara-piarahamonina ary ny ara-batana. Tsy ampy raha ny fiasana mafy, ny fikirizana ary ny fandraisana andraikitra fotsiny. Fa mitaky fahaiza-manao izany. Mahomby ny fampianarana rehefa tanterahina amin'ny fombam-pampianarana novolavolaina tsara sy tanterahin'ny manampahaizana tsara ofana miaraka amin'ny fahalalana, talenta ary fomba fiasa mifanaraka aminy ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana-fianarana mifanaraka amin'ny teknolojia ampy sy efa vonona (manana amby). Sarobidy kokoa ho amin'ny filaminana sy ny firoboroboan'i Pakistana ny mpianatra vitsy nahazo fampianarana tsara noho ny tanora maro dia maro manana diplaoma, diso lalana tsy mamokatra ka diso fanantenana. Ny “Chancelier-Lefitra” dia mpitarika ny Anjerimanontolony foana. Izy no tompon'andraikitra amin'ny fahatsaran'ny fanabeazana. Inona no azontsika antenaina amin'ny oniversite izay tsy mba manana “Chancelier-lefitra? Iriko mba hahazo ny dikan’ ny famolavolana ny fanabeazana hita farany amin'ny taonjato faha-21 ny olona ao Pakistana.
Kalsoom Lakhani ao amin'ny Changing Up Pakistan mampisongadina fandraisana andraikitra vaovao antsoina hoe ‘Mampianara ho an'i Pakistana‘, izay ao anatin'ny tambajotra manerantany Mampianara ny rehetra (ao anatin'izany koa ny Mampianatra ho an'i Amerika). Ity no voalazany tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Mampianara ho an'i Pakistan: Mitondra Zava-baovao amin'ny Fanabeazana”;
Ao Pakistan, sady be dia be no sarotra ny fanamby. Tsy mahatakatra ny fidirana amin'ny fanabeazana tsara sy mahomby ny ankamaroan'ny ankizy. Tsy manantsiny izy ireo manoloana ny rafi-pampianarana misy fahasamihafany be, izay saiky tsy mba ampianarina mihitsy izany hoe saina tia mamakafaka, sarotra ny mahita ireo mpampianatra mahay, ary mahazatra ihany koa ny mahita ireo nitsoaka an-daharana. Mety tsy hanova mivandravandra ny fiainantsika ny antontanisa saingy mampiditra antsika ho amin'ny ambaratonga vaovao handeha haingana kokoa sy mampiditra ny tanora ho amin'ny fandraisana andraikitra ny tetikasa sahala amin'ny Teach for Pakistan na Mampianara ho an'i Pakistana.
Tsy misy isalasalana, mbola lavitra ny lalana miandry an'i Pakistana amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra. Tadidiana ao an-tsaina fa zavatra roa samy hafa tanteraka ny fahaiza-mamaky teny sy ny fanabeazana, raha tsy miasa miaraka ireo dia herim-po very maina sady tsy misy ilàna azy ny “mamaky teny sy ny manoratra” .
51 minitra izayIndia